Imimangaliso yeSan Judas Tadeo Discover ➡️ Discover Online Online ➡️
Ongcwele uJude Thaddeus Ungomnye wabangcwele abanqulwa kakhulu el mundo. Enoba uyakholwa okanye akunjalo, ngokungathandabuzekiyo ukhe weva ngaye ngaxa lithile. Ukuba uhamba ngamaxesha anzima, unokucela le ngcwele ukuba akuncede. Funda nzulu malunga U-Saint Jude Thaddeus kunye nemimangaliso yakhe.
1 Luhlobo luni lwemimangaliso eyenziwa nguNgcwele uJude Thaddeus?
2 Yayingubani uSanta Jude Thaddeus?
3 Ezinye iinkcukacha malunga neSan Judas Tadeo
3.1 UThaddeus uthetha "ubukhulu"
3.2 Usweleke ecaleni kukaSimon Simon
3.3 Wayenombono kaYesu ngaphambi nje kokuba afe
3.4 Unencwadi eBhayibhileni
3.5 Uya kuba ngumzala kaYesu
4 Kutheni uthandaza kuYudas Thaddeus?
Luhlobo luni lwemimangaliso eyenziwa nguNgcwele uJude Thaddeus?
Kukho ukudideka xa kubhekiswa kwabangcwele, kuba ingengabo ababonelela ngemimangaliso. Nangona iinyani zisenza kubonakale kunjalo, ngokwenyani ziyayikhuthaza imimangaliso, kuba zinikwe nguThixo uMdali wethu neNkosi yethu. Nokuba sihamba ngamaxesha anzima okanye akunjalo, kulungile ukuthandaza nokugcina ubudlelwane noThixo kunye nabangcwele abasikhuselayo.
ISan Judas Tadeo yaziwa zizigidi zabantu emhlabeni "njengomxhasi wezizathu ezinzima." Oko kukuthi, imimangaliso ibangelwa kuye, kuba imeko acelwe yona, ithiyori, yinto engenakuconjululwa. Iyahlonitshwa, ubukhulu becala, ngabo bahamba neemeko ezilolu hlobo.
Le Ngcwele iyaziwa kwihlabathi liphela ngemimangaliso yokuphilisa, ikakhulu. Uninzi lwabantu abanezihlobo abazifumene bekwimeko enzima yempilo, baqinisekisa ukuba izalamane zabo zikwazile ukuqhubeka nokubulela kuye.
Ayizaliswanga nje kuphela ukuba uyaphilisa, yiyo loo nto emi ngaphandle, eneneni enikwa udumo ngokungaphezulu. Oko kwaziwa ngokuba "ngumphathi wezizathu ezinzima" sele kusixelela okuninzi. ISan Judas Tadeo ayiceliwanga kuphela impilo, kodwa nayo nayiphi na enye imeko entsonkothileyo engabonakali ngathi inamalungiselelo. Le Ngcwele ingasinceda ngokungabikho kwemisebenzi, ngeengxaki zemali, ukulahleka okanye ukungabikho kwekhaya, iingxaki zomtshato, phakathi kwezinye izinto ezininzi.
ISan Judas Tadeo yenzelwe amaKatolika, ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yezona Ngcwele zintanda zihlonitshwayo. Ukuba awunamsebenzi, unokuba nomdla ekufundeni malunga Umthandazo wokucela umsebenzi.
Yayingubani uSanta Jude Thaddeus?
U-Saint Jude Thaddeus waqatshelwa ngabaninzi njengo mzala ka Yesu uqobo, unyana kaThixo. Ngapha koko, kwimifanekiso enokubonwa nguYudas Thaddeus naphina, siyabona ukuba unokufana ngokwasemzimbeni. Ukongeza, kukho imifanekiso apho avele khona enomfanekiso kaYesu ezandleni zakhe, eziqaqambisa ubudlelwane bakhe ngakumbi nangakumbi ukufana ngokomzimba abanako.
UJudas Thaddeus wayengomnye wabapostile bakaYesu. Unikwe kwiVangeli "njengomntakwabo Yakobi." Umpostile wazanywa ngokungekho sikweni yindoda eyayingcatsha iNkosi, uYudas Skariyoti. Kukholelwa ukuba ngenye imini u-Okthobha u-28, uJudas Tadeo wabulawa ngesibetho entloko kwaye, kamva, wanqunyulwa intloko ngezembe.
Ngokubanzi, amaKatolika akholelwa ukuba uSanta Jude Thaddeus uyakwazi ukunika imimangaliso kuba ungumzala kaYesu. Ke ngoko, ibiya kuba namandla athile. Usweleke ecaleni kukaSanta uSimon, okwadunyiswa ngemimangaliso emininzi ngamaxesha anzima kakhulu.
Ezinye iinkcukacha malunga neSan Judas Tadeo
Baninzi abaqinisekisa ukuba, ngokuncedwa ngu-Saint Jude Thaddeus, banikwe imimangaliso. Ngenxa yoko, ungomnye wabangcwele abathandekayo nabahlonelwayo. Nazi iinyani malunga nale ngcwele ekufanele ukuqaqanjiswa ngayo:
UThaddeus uthetha "ubukhulu"
Isiko leCawa limbiza ngokuba nguJudas Thaddeus. Nangona kunjalo, abavangeli abangcwele uMarko kunye noMoya oNgcwele babhekisa kuye njengoThaddeus. Eli gama lokugqibela, alaziwa ncam ukuba livela phi, nangona kuthathelwa ingqalelo ukuba linokuvela kwi-Aramaic «taddà», ethetha «isifuba» kwaye, ke, «magnanimous». Kusenokwenzeka ukuba igama elithi Thaddeus livela kwisifinyezo segama lesiGrike elithi "Theodore" okanye "Theodotus." Igama elithi Yuda lithetha "ukudumisa makunikwe uThixo."
Usweleke ecaleni kukaSimon Simon
UJudas Thaddeus washumayela kwaYuda, emva koko eMesopotamiya, nasePersi kamva. Kule ndawo yokugqibela wadibana nompostile uSan Simón, kunye nabo walwa noqhekeko lwabahedeni iZaroes kunye neArfexat.
Ngokudibeneyo, bobabini uThadede noSimon bafumana isithsaba sokufela ukholo, yiyo loo nto iCawa ibabhiyozela ngemini enye: Okthobha 28.
Wayenombono kaYesu ngaphambi nje kokuba afe
UThadde noSimon bahlala kwikhaya lomfundi ogama linguSemme. Apho, ababingeleli abanqula izithixo kunye nesihlwele sabangqonga kwaye bafuna ukuba uSemme anikezele abapostile. UThaddeus emva koko waxelela uSimon ukuba uyayibona iNkosi, ebabizela ecaleni kwakhe. UThaddeus noSimon banikezela kwaye babulawa.
Ileta yileta evela kuYudas kwaye iyinxalenye yeTestamente eNtsha. Yileta, ekukholelwa ukuba, yabhalwa nguJudas Thaddeus, awayibhala ngaphambi kokuwa kweYerusalem, phakathi konyaka wama-62 nowama-65. Kukholelwa ukuba yabhalwa nguye kuba yabhalwa nguYudas, kaYakobi ubhuti.
Le leta iqulethe umthandazo kwaye ikumema ukuba ugcine ubunyulu bokholo. Isivakalisi sithetha oku kulandelayo:
«KuThixo olumkileyo yedwa, uMsindisi wethu, makubekho uzuko nembeko, ngoYesu Krestu iNkosi yethu. amandla namandla, ukususela ngaphambili lonke ixesha, ngoku nangonaphakade. Amen. "
Uya kuba ngumzala kaYesu
Abanye bakholelwa ukuba uJudas Thaddeus wayengumzalwana wompostile uYakobi, owayengunyana ka-Alfayo (Cleopas). Owokugqibela wayengumntakwabo Yosefu kwaye watshata noMary waseCleopas emva kokuba ngumhlolokazi kumtshato wakhe wokuqala. UJudas Tadeo wazalwa kulo mtshato wokuqala. UMaria de Cleopas, ekucingelwa ukuba, ngudade weNtombikazi enguMariya. UJudas Tadeo, unyana omkhulu, kunye noSantiago, omncinci, baya kuba ngabazala bakaYesu.
Nangona kunjalo, oku akukangqinwa, kuba ngelo xesha zonke izihlobo zabizwa ngokuba "ngabantakwabo" kwaye uMary waseCleopas unokuba ngumkhwekazi weNtombikazi kaMariya.
Kutheni uthandaza kuYudas Thaddeus?
Ukusuka koku kuchazwe apha ngasentla, ayingompostile nje okanye ingcwele, inokuba ingumzala kaYesu. Kukholelwa ke ngoko ukuba, ngenxa yobu budlelwane, wayenokubanento yamandla kaYesu, yiyo loo nto abo bathandazayo benokufumana imimangaliso. Nangona kunjalo, masingalibali ukuba abaNgcwele ababoneleli ngemimangaliso, kodwa kunokuba basithethelele phambi koThixo iNkosi yethu.
Ukuba unengxaki kwaye awuyiboni indlela yokuphuma, iSan Judas Tadeo inokukunceda uphume kuloo meko inzima.